Abaxhentsi badinga inkxaso - HeraldLIVE
The Algoa Sun Abaxhentsi badinga inkxaso January 25, 2014
EMVA kweminyaka elishumi elinesihlanu iqela lomxhentso wesintu i-Kuyasa lasekwa lisaqhubela phambili.
Eliqela lase-NU11 lasekwa ngu-Nosamkelo Madlebe ongaphangeliyo ngo-1997. Linabaxhentsi abangamashumi amane anesibini,ngelixa waliqala nabantwana abasibhozo.
“Iinjongo zam yayi kukufundisa abanntwana ngamasiko nezithethe zakwantu, kunye nendlela yokuziphatha.
“Umntwana womXhosa obhinqileyo kufuneka ayazi ukuba intombi yomXhosa kufuneka ihlale iyintombi nto ide ifikelele kwixabiso lomtshato,” utshilo u-Madlebe.
Wongeze ngelithi waqala eliqela kuba wabona indlela ulutsha olwaluziphethe ngayo.
“Ndabona ukuba basebenzisa iziyobisi kunye notywala. Ndahlupheka emphefumlweni ndaqonda mandenze into.”
Amalungu eliqela aphakathi kweminyaka elishumi elinanye ukuya kumashumi amabini anesithathu. Bazilolonga e-NU10 kwisitalato i-Gomasi mihla le ukusukela ngentsimbi yesithathu ukuya ngeyesine.
Omnye wabaxhentsi u-Thembelani Meva – oneminyaka emashumi amabini anesithathu – uthe eyona nto eyamenza angene kweliqela luthando lomculo wakwaNtu nendlela amaXhosa axhentsa ngayo.
“Ukungena kweliqela lomxhentso kwaba luncedo kum kuba ndingumntu owayethanda ukusebenzisa utywala neziyobisi,”utshilo u-Meva.
“Ndiyakuthanda kakhulu ukuxhentsa.”
U-Madlebe ubetha igubu kweliqela selisuka kuphumelela ukhuphiswano lwabaxhentsi besintu e-Mthatha olubizwa Zindala Zombini ngo-2009.
Baphinda baphumelela olunye ukhuphiswano olwalubanjelwe e-NU2 i-Youth Development ngo-2000.
Benza indithi ngendithi zomxhentso – umguyo, umngqungqo, umtitimbo, umtshongolo, ukuteya, ukuthwahla, ukutyhuluba kunye nokutsholoza.
“Kwiminyaka emithathu edlulileyo khange sikwazi ukuya koluya khuphiswano lubanjelwa e-Mthatha ngenxa yokungabi namali.
“Sixhentsa kwiindawo ezifana ne-Raymond Mhlaba Sports Centre e-NU4 kunye nase-Boardwalk e-Summerstrand ukuze sibenemali yokuya kukhuphiswano,” wongeze ngelitshoyo.
Nabanina ongakwazi ukunceda eliqela angatsalela u-Madlebe ku-078-103-2457, okanye afake imali kwibhanka yalombutho phantsi kwe-Aristox cc 924252621. Absa bank.
Police trailer for hotspots
Enkosi Bay TV – batsho abahlali
Stortingsterrein is gesluit na klagtes